Travel ~ Htet Aung Kyaw
12:06 PM Htet Aung Kyaw
သန်းကောင်ယံမှာ ထွက်တဲ့-နေ- ရှိရာအရပ်သို့ အလည်တခေါက်။
North Cape မှ သန်းကောင်ယံ နေ-အလှ
ဘာကြောင့် နေမ၀င်ညနဲ့ နေမထွက်တဲ့နေ့ တွေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကို ရှင်းပြတဲ့ပုံ
ကျနော်ရောက်ခဲ့တဲ့ Tromsø မြို-
သန်းကောင်ယံ နေ-ကို မြင်နိုင်တဲ့ဒေသများ-
270511 HAK Midnight Sun-Edited
နော်ဝေးမြောက်ပိုင်း သန်ကောင်ယံမှာထွက်တဲ့ နေ- ရုပ်သံ-မှတ်တန်း
နေမ၀င်တဲ့ညများနဲ့ နေမထွက်တဲ့နေ့တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုနိင်ဖို့အတွက် ဆောင်းတွင်းကာလ
ဖင်လန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းခရီးစဉ် ရုပ်သံ-မှတ်တန်းကိုလဲ ပူးတွဲ တင်ပေးထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လ ထိုင်းခရီးစဉ်အတွင်း ကျနော်ပထမ-ဆုံး သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့တဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကတော့ မဲဆောက်-မြ၀တီ- ချစ်ကြည်ရေးတံတားဂိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဲဆောက်ဖက်ရောက်တိုင်း ဒီတံဆီ သွား။ မြ၀တီဖက်ကိုငေးကြည့်- အဲ...အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တောီ့ မြ၀တီကိုစိတ်ကူးနဲကျော်ဖြတ်ပီး မော်လမြိုင်-ရန်ကုန်-မန္တလေးအထိ မျော်ကြည့်မိတယ်ဆိုပါတော့။ ထူးခြားတာကတော့ အယင်ခေါက် တွေသွားစဉ်က ချစ်ကြည်ရေးတံတားလဲ ဖွင့်။ တံတားအောက်က မှောင်ခိုလမ်းတွေလဲဖွင့်။ ၂-လမ်းသွား နည်းနဲ့ ကုန်သွယ်နေတာကိုတွေ့ရပေမဲ့ ဒီတခေါက်ခရီးစဉ်မှာတော့ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးကိုပိတ် ထားတာနဲ့ တိုးနေခဲ့ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း တံတားရဲ့ ညာဖက်အောက်နားမှာစိုက်ထားတဲ့ "The Moei River, the westernmost point" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ရှေ့မှာဓါတ်ပုံရိုက်။ အဲဒီဆိုင်းဘုတ်အနီးက ကမ်းနားလမ်း ဘေးတလျောက်မှာရောင်းချနေတဲ့
မြန်မာဖက်လာတဲ့ မှောင်ခိုပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကြည့်။ ဒါပေမဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက် တာကိုတော့ အဲဒီဈေးသည်တွေက သိပ်ကြိုက်ပုံမရပါဘူး။ မကြိုက်ဆို... ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကလဲ ကြည့်ပါဦး။ ဈေးပေါတဲ့အရက်မျိုးစုံ။ ဆေးလိပ်မျီုးစုံ။ ဆေးဝါးမျိုးစုံအပြင် အပြာကားမျိုးစုံ ဗွီဒီယို-အခွေတွေ။ နို့သီးခေါင်းအတု။ လိင်တံအတုတွေ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိမ်းဆေးတွေ စသဖြင့်...စသဖြင့် စုံနေတာပါဘဲ့။
မှောင်ခိုရောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ လျှို့လျို့ဝှက်ဝှက်မဟုတ်တော့မဟုတ်- ပူလီ-ပူလီ (ဆေး လိပ်) လို့မနားတန်းအော်နေ တဲ့အပြင် "ဒါယူမလား အကိုး- ဈေးလဲပေါတယ်- ကောင်းလဲကောင်းတယ်။ ဟောဒီလို-ဟောဒီလို လုပ်လို့ရတယ်လေအကိုး" ဆိုပီး ရော်ဘာလိင်တန် အတုကို အမျီုးမျီုးလှုပ်ပြ- အော်ဟစ်ရောင်းချနေသူတဦးကိုလဲ တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။
အဲဒီဈေးတန်းကိုကျော်ပီး ရှေ့နဲနဲ ဆက်လျောက်မယ်ဆိုရင် မကြာခန ပြသာနာတက်လေ့ရှိတဲ့ ရေ လည်ကျွန်းဆိုတာ ကို ရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေးစိတ်မချရဘူးဆိုပီး ကျနော်ကိုလိုက်ပိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကပြောလို့ အဲဒီကျွန်းထဲအထိတော့ မ၀င်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
တံတားဖက်ကိုပြန်လျောက်ပီး ဗီဒီယို-ရိုက်ဖို့ပြင်တော့ ထိုင်းစစ်သား ၃-ဦးနဲ့တိုးပါတယ်။ မြန်မာ စစ်သားတွေလို ဗီဒီယို-ရိုက်ခွင့်တား မြစ်မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့ -"မဲပင်လိုင်-ထန်လုကောဒိုင်း။ ဗီဒီအို-ကောဒိုင်း" ဆိုပီး M16- မောင်းပြန် သေ နပ်ကိုင်ထားတဲ့ အသက် ၂၀-ကျော်အရွယ် ထိုင်းစစ်သားက ကျနော် ကိုပြောပါတယ်။ ကျနော် တကယ် ရိုက်တော့ ကင်မရာကိုသူကကျော်ပေးပီး တယ်လီဖုန်းပြောနေတဲ့အတွက် အင်တာဗျုး-တော့ မလုပ်နိုင် ခဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဓါတ်ပုံလုံးဝရိုက်ခွင့်မပေး။ သတင်းထောက်လုံးဝ လက်မခံဘူးဆိုပီး အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့ ဒီ နယ်စပ်ရဲ့သောင်ရင်းမြစ် ဟိုဖက်ကမ်းကနေ အခြေနေကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့ မြန်မာစစ်သားတွေနဲ့စာရင်တော့ ထိုင်းစစ်သားတွေရဲ့ မီဒီယာနဲ့ဆက်ဆံရေး အခြေနေက အများကြီးကောင်းပါတယ်။
သောင်းရင်းမြစ် ဟိုဖက်ကမ်းနေ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ မြန်မာစစ်သားတွေ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ ဆိုပီး ကျနော်သိချင်လာတဲ့အတွက် အဲဒီဂိတ်နား နီးနိုင်သမျှ နီးအောင်သွားဖို့ ကျနော်ကျိုးစားပေမဲ့ ကျ နော်သူငယ်ချင်းက ခွင့်မပြု။ သူစိုးရိမ်မယ်ဆိုလဲ စိုးရိမ်စရာပါဘဲ့။ ထိုင်းစစ်သား ၄-၅-ဦးက တံတား အောက်မှာဘဲ့ ထိုင်စောင့်နေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဖက်ကနေ တဖွဲဖွဲတက်လာနေသူတွေဟာ ထိုင်းစစ် သားတွေထိုင်နေတဲ့နေရာကနေ လှမ်းမမြင်နိုင်တဲ့ ချစ်ကြည်ရေးတံတားရဲ့ အောက်ဖက်နားကနေ လူသွား လမ်းလေးတလျောက်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်သိပ်သွားချင်နေမှန်းသိတော့ ကျနော်သူငယ်ချင်းကလမ်းကြောင်းရှာပီး တောလမ်းကနေပါတ်ပီး အဲဒီရေဆိပ်အနီးထိ ကားမောင်း သွားပါတယ်။
ဟော- ကားရပ်တဲ့နေရာကနေ မြစ်ကမ်းနားဘောင်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ လူတွေရာနဲ့ချီ အသွား-အပြန် သယ်ပို့နေတဲ့ လယ်ထွန်စက်အတွင်းတာယာ-သုံး ခရီးသည်တင်ယဉ်တွေကိုတွေ့ပါ လေရော့။ ဒီနေရာကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် လာခွင့်မပြုတဲ့အတွက် ဒီမြင်ကွင်းအပေါ် နိုင်ငံခြားသားတွေ ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာ ကျနော်မေးခွင့်မရလိုက်။ ဒါပေမဲ့ ဥရောပပြန် ကျနော်မျက်စီထဲမှာတော့ တကယ့်ကို ကိုးယိုးကားယားပါဘဲ့။ ပေ ၅၀-လောက်သာကွာတဲ့အပေါ်ဖက်မှာ ဘတ်ငွေ သန်း ၂၀၀-လောက်အကုန်ကျခံဆောက်လုပ်ထားတဲ့ တံတားကြီးရှိပါရဲ့နဲ့ အဲဒီတံတားကိုပိတ်ထားပီး တံတားအောက်ရေပြင်ထဲ ကနေ လယ်ထွန်စက်တာယာကိုစီးပီး သက်စွန့်ဆံဖျားရေထဲကူးနေရတယ်လို့။
အသံ မထွက်အောင် ထွန်စက်တာယာကို သုံးတာလား။ လောင်စာဆီသက်သာအောင်သုံးတာလားဆိုတာကို တော့ ကျနော်အတိအကျမသိခဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဟိုဖက်ကမ်း-ဒီဖက်ကမ်းအော်ပြောနေကြတဲ့အသံတွေက တော့ လှေစက်သံထက်တောင် ပိုကျယ်နေတဲ့အတွက် အသံမထွက်အောင်။ ၂-ဖက် အာနာပိုင်တွေ မသိအောင် ခိုးသွားနေတာမျိုးတော့ ဟုတ်ပုံမရပါဘူး။ တရားဝင်တပိုင်းအဖြစ် မြန်မာစစ်တပ်ကို အခွန် ငွေဆောင်ပီး သွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းဖက်ကမ်းကိုရောက်လာတဲ့ ခရီးသည်တချီု့ကပြောပါတယ်။
ဒီသောင်ရင်းမြစ်ဖြတ် ထွန်စက်တာယာ ရေယဉ်ကို ဗွီဒီယို-ရိုက်ရတာကလဲ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ ဟိုဖက်ကမ်းက နအဖ-တပ်က မှန်ပြောင်းနဲ့ဆွဲပီး ကြည့်နေသလားဆိုတာ စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ နောက် တခါ ဒီလမ်းကြောင်းကိုကြီးစိုးထားတဲ့ လူပွဲစားတွေကလဲ ဒီလိုရိုက်တာကိုသိပ်ကြိုက်ပုံမရ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကတော့ တည့်တည့်မပြော။ လူပွဲစားပီသစွာနဲ့ ဒီပလိုမေစီသုံးပီး
ဟာဒီလိုပြောပါတယ်- "ဟေး နင်တို့ ဒီဖက်မှာဗွီဒီယို-ရိုက်တာကတော့ ပြသာနာမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဟိုဖက်ကမ်းက မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ပီး စနိုက်ပါ-နဲ့ ပစ်လိုက်ရင် ပြသာနာဖြစ်မယ်" တဲ့။ ဒီတော့ ကျနော်တို့လဲ ပျောက်ကျားနည်းကို သုံးး ၃-မီနစ်ရိုက် ၃-မီနစ်ပြေးစနစ်နဲ့ မဲဆောက်မြိုဆီ ခပ်သွက်သွက်လေး ပြန်လှည့်လာခဲ့ရပါတယ်။
(အသေးစိပ်ကို ဗွီဒီယို-ဖွိုင်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်)
လူသားစွမ်းအင်သုံး ခေါတ်သစ်ရေယဉ်တွေကိုလေ့လာပီးတဲ့နောက် ဒုတိယ-နယ်စပ်ဂိတ်အဖြစ် ကျနော် ရောက်ခဲ့နေရာကတော့ နိုပိုးဒုက္ဒသည်စခန်းကနေ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ တနာရီနီးပါး ထပ် သွားရတဲ့ ပန်ခရာ. ဂိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ တကယ်က အဲဒီနေရာဟာ မဲဆောက်-အုန်းဖျန်။ အုန်းဖျန်-နိုပိုး- လိုင်းကား ဂိတ်-ဆုံးတဲ့နေရာဖြစ်လို့ မဲဆောက်ကနေ လိုင်းကား တခါတည်း စီးပီးလာရင်လဲရောက်နိုင်တဲ့နေရာပါ။ လမ်းကတော့ အတော်ဆိုးပါတယ်။ ကတ္တရာတွေကွာ နေတဲ့အပြင် ချိုင့်ခွက်တွေကလဲ အတော်များတဲ့အတွက် ဆိုင်ကယ်ကိုတောင် အရှိန်နဲ့မောင်းဖို့သိပ် မလွယ်တဲ့နေရာမျိုးပါ။
အဲဒီရွာကိုဝင်ဝင်ချင်း ကျနော်သတိထားမိတာကတော့ ကေအန်ယူ-တပ်မဟာ ၆-နယ်မြေထဲက ရွာတွေလို ကွမ်းသီးပင်တန်းတွေ။ ကျွန်းသစ်တိုင်အကြီးကြီးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ သစ်သား အိမ်တွေ။ နွား ထိမ်းသိမ်းရေးစခန်းတွေ။ (မြန်မာပြည်ကနေပို့လာတဲ့နွားတွေကို ထိုင်းဖက်က ကုန်တင် ကားပေါ်မတင်မှီ ထိမ်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကို အတိကျမခေါ်တတ်လို့ သင့်သလိုသုံးလိုက်ပါတယ်)။ စား သောက်ဆိုင်။ အ၀တ်ဆိုင်နဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
နယ်စပ်ဂိတ်ကိုလဲရောက်ရော။ ဟိုဖက်ကမ်းမှာ သုံးရောင်ချယ်-ကြယ်ဖြူတလုံးပါတဲ့ အလံတိုင် ကိုသာမြင်ရပီး စစ်သားတွေရဲ့အရိပ်အယောင်ကိုမမြင်ရ။ အလံတိုင်အောက်က ၀ါးတားဂိတ်ကိုကျော်ပီး မြန်မာဖက်ကဈေးတန်းကို သွားလည်လို့ရတယ်လို့ ကျနော်ကိုလိုက်ပို့တဲ့သူငယ်ချင်းကပြောပေမဲ့ သူလဲ မသွားရဲ။ ကျနော်လဲ မသွား ရဲခဲ့။ ဒါနဲ့ဘဲ့ နယ်စပ်ဂိတ်တည့်တည့်မှာရပ်။ ဗီဒီယို-မှတ်တန်းရိုက် မယ်ပြင် တော့ ဟိုဖက်-ဒီဖက်သွားနေတဲ့ ယဉ်တွေက လယ်ထွန်စက်အသေးစား။ သို့မဟုတ် ဒေသအခေါ် ထော် လာဂျီ-တွေဖြစ်နေတာကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ (အသေးစိပ်ကို ဗီဒီယို-ဖိုင်မှာ ကြည့် နိုင်ပါတယ်)
No Poe Gate
မယ်ဆိုင်-တာချီလိတ်-ဂိတ်- သို့မဟုတ် ၆-ပေ ချောင်းခြား တို့နှစ်ယောက်သား
ဒီတခေါက် ခရီးစဉ်အတွင်း မြ၀တီနဲ့ ---နယ်စပ်ဂိတ်မှအပ အခြားနယ်စပ်တွေဆီ သွားဖို့အချိန် မရလိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်တွေအတွင်း နယ်စပ်ဂိတ်အားလုံးနီးပါးဆီ ကျနော်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွက် မယ်ဆိုင်-တာချီလိတ် နယ်စပ်ဂိတ်ရဲ့အခြေနေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်---(ဗီဒီယို-ဖွိုင်မှာ ကြည့် ပါရန်-)
ရနောင်း-ကော့သောင်-ဂိတ်- သို့မဟုတ် သက်စွန့်ဆံဖျား ပဲချိတ်သမားများ
ကော့သောင်-ရနောင်း ဂိတ်ကိုတော့ ဒီတခေါက်ခရီးစဉ်အတွင်း ခနရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ဗီဒီယို-ရိုက်ဖို့ အခြေနေမရခဲ့။ ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့နှစ်အတွင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ နယ်စပ်ဂိတ်များခရီးစဉ် ဗီဒီယို-ကိုဘဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။
နတ်အိမ်တောင်နဲ့ ဘုရားသုံးဆူဂိတ်- သို့မဟုတ်- နယ်ကျွံသွားတဲ့ သူပုန်သတင်းထောက်ရဲ့ ရင်ခုန်သံ
သွားဖူးခဲ့သမျှနယ်စပ်ဂိတ်တွေထဲ ကျနော်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဘွယ်အကောင်းဆုံး နယ်စပ် ဂိတ် ၂-ခုကတော့ နတ်အိမ်တောင်နယ်စပ်ဂိတ်နဲ့ ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်တွေပါ။ နတ်အိမ်တောင်ဆိုတာ ဟာ ရတနာဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းဖြတ်သွားတဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တည့်တည့်က ကျေးရွာတခုဖြစ်ပီး အဲဒီ ပိုက်လိုင်းမဖြတ်ခင်အထိ ကေအန်ယူနဲ့ ABSDF ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကြီးပါ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လဲ ABSDF အဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ် အဲဒီမှာနေဖူးတဲ့အပြင် ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတလျောက်မှာလဲ သတင်းထောက်ပေါက်စတဦးအဖြစ်နဲ့ အဲဒီဝန်းကျင်ကို မကြာခနရောက်ခဲ့ဖူးသူပါ။
ကျနော်အထင် ၁၉၉၆ နှောင်းပိုင်းလို့ထင်ပါတယ်။ ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်မှု မြန်မာဖက်ခြမ်းအပီးသတ်တဲ့နေ့မှာ မှတ် တန်းဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် ပြင်သစ်သတင်းထောက်တဦးနဲ့အတူ အဲဒီနတ်အိမ်တောင်စခန်းကို ကျနော် ရောက်သွားပါတယ်။
အဲဒီကာလက ကျနော်မှာ ခရီးသွားလက်မှတ်ဆိုလို့ မြန်မာစာအုပ် အတုတောင်မရှိသေး။ ဘန်ကောက်-ခေါက်ဆန်-လမ်းမှာလုပ်ထားတဲ့ သတင်းထောက်ကဒ်ပြားအတုတခုကလွဲပီး ဘာမှမရှိ။ ဒါ ပေမဲ့ ကျနော်နဲ့အတူသွားတဲ့
ပြင်သစ်သတင်းထောက်မှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပေးထားတဲ့ သတင်းထောက်ကဒ်ရှိတဲ့အတွက် ကန်ချနပူရီ။ ထုံပါဖုံ။ နတ်အိမ်တောင်လမ်းတလျောက်ရှိ ရဲနဲ့ တောချတော (ထိုင်း-နယ်ခြားစောင့်တပ်လို့ခေါ်ရမယ်ထင်ပါတယ်) က သိပ်မစစ်ဆေးပါဘူး။
နတ်အိမ်တောင်ကိုအတက် နောက်ဆုံးဂိတ်- (မြန်မာအခေါ် ကျောင်းသားစခန်း-သို့မဟုတ် ကျောက်ပုံစခန်း) ရောက်တော့ အိုင်ဒီ-တွေကိုအသေချာထုတ်စစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ထိုင်းတ၀က်-အင်္ဂလိပ်တ၀က်နဲ့ ရွီးတဲ့အခါမှာတော့ "မင်းက ပြင်သစ်သတင်းထောက်အတွက် မြန်မာ-ထိုင်း-အင်္ဂလိပ် စကားပြန်လို့ ပြောပီး ထိုင်းစကားလဲ မပီဘူး'' လို့ တောချတောတဦးပြုံးစီစီနဲ့ပြောပီး -ပိုင်-ပိုင်-လို့ ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားလုံခြုံရေးအတွက် သူတို့ဆီက စစ်သားတဦးထည့်ပေးရမလားလို့မေးတော့ ပြင်သစ်သတင်းထောက်က မလိုဘူး-ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် ထိုင်းစစ်းသားမပါဘဲ ကျနော်တို့ ၂-ဦး တည်းဆက်လျောက်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နတ်အိတ်တောင်အခြေနေက အယင် ကျနော်တို့ ABSDF - အခြေစိုက်တုန်းကလိုမဟုတ်တော့။ ကျနော်တို့ကျောင်းသားစခန်းဟောင်းခြေရင်းမှာ အမှတ် ၂၈၈-တပ် ရင်းဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့ရပီး လက်နက်ကိုင်စစ်သားတွေ ကလဲအပြည့်။ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်ပုံဖမ်းပီး ခပ်တည်တည်နဲ့ဆက်လျောက်သွားတော့ ပိုက်လိုင်းချနေတဲ့နေရာ အလံတိုင်ကုန်းခြေရင်းကိုရောက် သွားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ပြင်တော့ ''No Photo, No Photo" ဆိုပီး ကာဘိုင်သေနပ်နဲ့ ၀ါကီတော်ကီ ကိုင်ထားတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတဦးက ကျနော်ဆီပြေးလာပီး ကင်မရာကိုလက်နက်လာပိတ်ပါတယ်။ "Sorry" လို့ပြောပီး အလံတိုင်ကုန်းဖက်တက်ဖို့ပြင်တော့ -ခင်ဗျားက ဂျပန်လား။ ဒီမှာဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိ ပါဘူး- လို့ အဲဒီတပ်ကြပ်ကြီးက မြန်မာအသံထွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောပါတယ်။ ကျနော်ပြန် ပြောရင် ကျနော်မြန်မာအသံထွက် ကိုရိပ်မိပီးပြသာနာတက်မှာစိုးတာနဲ့ သူရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကို နားမလည်သလို ဟန်ဆောင်ပီး ဘာမှပြန်ပြောဘဲ ပြုံးပီး ဟိုငေး-ဒီငေးနဲ့သာ သင့်သလိုနေလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခြေနေက ကြာကြာနေရင် ပေါ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်သစ်သတင်းထောက်ကိုပြောပြပီး ထိုင်း ဖက်ကမ်းကို ကျနော်ပြန်ပြေးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်သတင်းထောက်ကတော့ ကျနော်သင်ပေးထားတဲ့ မြန်မာစကားအနဲအကျဉ်းကို အသုံး ချ။ ၂၈၈-တပ်ရင်းထဲအထိဝင်ပီး တပ်ရင်းမှုးနဲ့တောင် အင်တာဗျုးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄-ရက်နေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာပါ ဓါတ်ပုံအပါဝင်) အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ဓါတ်ပုံအတော် မျာများကိုလဲ သူရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (အဲဒီကာလက ဗွိဒီယို-ကင်မရာမရှိသေးတဲ့အတွက် ၂၀၀၈-မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယို-ကိုတင်ပေးထားပါတယ်)
ကျနော်အတွက် ဒုတိယ-စိတ်လှုပ်ရှားဘွယ်အကောင်းဆုံး နယ်စပ်ဂိတ်ကတော့ ဘုရားသုံးဆူ ဂိတ်ပါ။ ဘုရားသုံးဆူဟာလဲ ABSDF- မှာ ကျနော်တာဝန်ထမ်းစဉ် ၁၉၈၉-အစောပိုင်းမှာ ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာပါ။ အဲဒီကာလကတော့ စန်ခရ-သုံးဆူလမ်းဟာ မြေနီလမ်းအဆင့်ဘဲ့ရှိသေးပီး ဘုရားသုံးဆူဂိတ် ကိုတော့ ကေအန်ယူနဲ့ မွန်ပြည်သစ်တို့ရဲ့ ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်။ ဒေသတခုလုံး ကို အတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေက ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေနေမှာရှိနေ ဆဲဖြစ်ပီး သုံးဆူကနေ မက္ကသာ-ရွာကိုဖြတ် ကေအန်ယူ-တပ်မဟာ ၆-နယ်ထဲဝင်ပီး မဲဆောက်အထိ ကားလမ်းနဲ့ သွားနိုင် တဲ့ အခြေနေပါ။ ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးချင်တော့ ကျနော်တို့အဖွဲ့သွားတဲ့အချိန်ကျမှဘဲ့ ရှေ့တန်းမှာ စစ်ကြောင်း ရှုပ်နေလို့ လုံခြုံရေးစိတ်မချရဘူး။ ကားမပြေးဘူး။ ဘန်ကောက်ကဘဲ့ပြန်ပတ်ပီးသွားပါဆိုလို့ ကျနော် တို့အုပ်စု ABSDF တပ်ရင်း ၁၀၁-နဲ့ ၁၀၂-မှာ သတင်း ၂-ပါတ်ကြာသောင်တင်နေခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ ၁၀၁-နဲ့ ၁၀၂-အခြေစိုက်တဲ့နေရာက မွန်ပြည်သစ်ပါတီဌာန ချုပ်နဲ့နီးနီးလေး။ တပ်ရင်းရုံးကနေ ၅-မီနစ်လောက်လျောက်လိုက်တာနဲ့ စန်ခရ-သုံးဆူ ကားလမ်းပေါ် ရောက်နေပီ။ အဲဒီကားလမ်းရဲ့ ဒီဖက်ခြမ်းဟာ မြန်မာနယ်မြေဖြစ်ပီး ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတခုရှိတဲ့ ကားလမ်းဟို ဖက်ကမ်းတလျောက်ကတော့ ထိုင်းနယ်မြေလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြားမှာ ဘာမှအတားဆီးမရှိပါဘူး။ မွန်တပ်ဖွဲ့တွေ။ ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေ။ သာမန်ပြည်သူတွေအားလုံး ဒီတိုင်းဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းသားစခန်းရဲ့ ကားလမ်းတဖက်ချမ်းကရွာရဲ့အမည်က တော့ နန်းမကေ့-လိုိ ကျနော်စိတ်ထဲမှတ်မိနေပါတယ်။
အဲဒီခရီးစဉ်နောက်ပိုင်းကစပီး သုံးဆူဖက်ကိုကျနော်မရောက်ဖြစ်တာ ၂၀၀၆-နှောင်းပိုင်းအထိ လို့ထင်ပါတယ်။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇-ထိုင်းခရီးစဥင်္အတွင်း သုံးဆူဒေသကိုကျနော်သွားလေ့လာကြည့်တော့ အခြေနေကအတော်ပြောင်းလဲနေပီ။ တချိန်က မြေနီလမ်းလေးဟာ အခုတော့ ၄-လမ်းသွား ဟိုက်ဝေး ကားလမ်းကြီးဖြစ်နေပါပီ။ သုံးဆူမြိုကိုလဲ နအဖ-က အုပ်ချုပ်ရေးချထားပီး ရှေ့မှာကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ ကား လမ်းတလျောက်က မွန်ပြည်သစ်နဲ့ ABSDF တပ်တွေဟာလဲ ဒီကားလမ်းဝန်းကျင်မှာမရှိတော့ပါဘူး။ မွန် ပြည်သစ်ပါတီတောင် စစ်အစိုးရနဲ့အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ပီးလို့ သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုတောင် ရေးချောင်း ဖျားဖက်ရွေ့ထားပီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စေတီသုံးဆူရှိတဲ့နေရာနဲ့ အဲဒီဝန်းကျင်က ဆိုင်တန်းတွေကတော့ အယင်ကထက်ပိုစည် ကားလာတာကလွဲရင် သိပ်အပြောင်းလဲမတွေ့ရပါဘူး။ စေတီ ၃-ဆူရှေ့မှာကင်မရာကိုထောင်။ သုံးဆူ ဖက်ကိုဆွဲရိုက်။ နယ်စပ်ဂိတ်တည့်တည့်မှာရိုက်။ အလံတိုင်ပါတ်လည်က ဆိုင်တန်းတွေကိုရိုက်။ သစ်ခွ ပန်းရောင်းနေတဲ့ဆိုင်တန်းတွေကိုရိုက်ပီးတဲ့အခါမှာတော့ ဗိုက်ဆာလာတဲ့အတွက် ကွီတီယို-စားမယ်ဆို ပီး အလံတိုင်ဘေးက ဆိုင်တဆိုင်ထဲ ကျနော်ဝင်လိုက်ပါတယ်။ ကွီတီယို-နဲ့ ခေါက်ဖတ်ကိုင် (ထိုင်း-ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ ထမင်းကြော်) ကိုမှာထားပီး အပေါ့အပါးသွားချင်လို့ ဆိုင်-နောက်ဖေးကို ကျနော်ဝင် သွားပါတယ်။
ကံဆိုးတယ်ပြောရမလား။ ကံကောင်းတယ်ပြောရမလားမသိပါ။ အိမ်သာတံခါးနဲ့ အိမ်နောက် ဖေးတံခါးကိုမှားဖွင့်မိပီး
မြန်မာနယ်မြေထဲကို ကျနော်ရောက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို ဘယ်လိုအက်ဒစ်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပီး
စဉ်းစားနေတဲ့ ကျနော်ခေါင်းက မြန်မာနယ်မြေထဲ ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိသေး။ ရှုးရှုးပေါက်ဖို့သစ်ပင်တွေ။
ခြုံတွေကွယ်တဲ့နေရာကိုရှာရင်းနဲ့ ရှေ့မှာ ကြယ် ၁၄-လုံးပါတဲ့ အနီရောင်အလံကြီးကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ အသေချာကြည့်တော့ ယယက-ရုံး-ဖြစ် နေပါတယ်။ ဒီတော့မှ အိမ်သာတံခါးနဲ့ အိမ်နောက်ဖေးတံခါးမှားဖွင့်ပီး မြန်မာနယ်မြေထဲရောက်နေပီ ဆိုတာကိုသိ လိုက်တဲ့အတွက် ရှုးရှုးတောင်မပေါက်နိုင်ဘဲ ခပ်မြန်မြန် ပြန်ပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။ (သုံးဆူက ပုံတွေကို တင်ပေးထားပါ တယ်)
1997-ဖေဖေါ်ဝါရီလ ထိုးစစ်အတွင်း မင်းသမီးစခန်းကနေ ထန်ဟင်-ဒုက္ဒသည်စခန်းဆီထွက်ပြေးလာပုံ
120511_HAK_Depp Sea Port 1
နိုပိုး ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ အလည်တခေါက်-
210411_HAK_No poe Trip
180311 HAK Ski and Bike-Edit
"That is why I suggested you look to Abhisit," the journalist went on. "Then you woulf find some creative ideas about how to breaka20-year political deadlock rather than holding on to traditional ways of thinking such as ‘kill or be killed’, or ‘aggression or destitution’."